ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ABSDF သမိုင်း ABSDFရဲဘော်ဟောင်း ကြည့်ခွင့်မရှိ...
by Htay Tint on Thursday, February 7, 2013 at 5:39pm ·
နိုင်ငံတကာမှာ နေထိုင်ကြသော ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ
အာဏာရှင်စစ်အစိုးရကို အသက်ပေးပြီး ဖြုတ်ချမယ်ဆိုတဲ့ သံမဏိစိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ 
၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းအပြီး လက်နက်ကိုင်နယ်မြေအသီးသီးမှာ စုစည်းခဲ့ကြတယ် ။
အနာဂါတ်မြန်မာပြည်အတွက် ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးခဲ့ကြတယ် ။
၁၉၆၂ နောက်ပိုင်းကစလို့ 
ရေကြည်အိုင်နဲ့စစ်ထောက်လှမ်းရေး စခန်းတွေမှာ
ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်တာတွေ ပပျောက်စေမဲ့
ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ အခွင့်အရေး ကိုလေးစားတဲ့
ပြည်သူ့ အစိုးရ့ ပေါ်ပေါက်ဖို့ 
ကျရာနေရာက တာဝန်ယူခဲ့ကြတယ် ။
အသက်ပေးမဲ့ တိုက်ပွဲဝင်တွေ အချင်းချင်း
မယုံကြည်သူတွေ ဖမ်းဆီးတယ် ။
လပေါင်းများစွာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်စက်တယ် ။
ဝန်ခံချက်မပေးတဲ့သူတွေကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့ကြတယ် ။
ဝန်ခံသူတွေကို ဗီဒီရိုက် ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးပြီး
နိုင်ငံတကာမှာ သားစဉ်မြေးဆက် လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာငြိုးနွမ်းအောင်
တောထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ မသိအောင်ဖြန့် ဝေခဲ့တယ် ။
ကျောင်းသားတပ်တော်ရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို
ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ချိုးဖေါက်ခဲ့ကြတယ် ။
ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ဆန္ဒပေးပြီး တင်မြောက်ခဲ့ဖူးတဲ့
ဗဟိုကော်မီတီထဲက လူတချို့ ရဲ့ပင်ကိုယ် ဇာတ်တိရုပ်ကို
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်မှာ မြင်လာရပြီ ။
ကျုပ်တို့ တော်လှန်ရေး အင်အားတွေချိနဲ့ ပြီး
ပြည်သူလူထုက ကျုပ်တို့ ကို ထွီ ဆိုပြီး လုပ်အောင်
ရွံစရာ ကြောက်စရာ ကလိမ်ကကျစ် အာဏာရူး
ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ တနေ့ တခြား သိလာရပြီ ။
ကျုပ်တို့ ရဲ့ 
နောက်ဆုံးကာလ နာကျည်းစွာ ဝန်ခံလိုက်ရတဲ့ သမိုင်း
ကျုပ်တို့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်သမိုင်း
ကျုပ်တို့ကြည့်ရှု့ လေ့လာခွင့်မရှိတော့ဖူး ။
စဉ်းစားမိရင် ရင်ဘတ်ထဲက တစစ်စစ် နာလာတယ်ဗျာ ။
ABSDF ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့တပ်ဖွဲ့ ဝင်ဟောင်းတွေအတွက်
ကျုပ်တို့တခုခု လုပ်မှရမယ် ။
ဖြစ်နိူင်တဲ့ နည်းလမ်းတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ
လုပ်နေသူတွေကို အားပေးပါတယ် ။
နယ်သာလန်နိုင်ငံက တိကျတဲ့ဥပဒေနဲ့ 
ရာဇဝတ်သားတွေ ဖေါ်ထုတ်မဲ့ အထောက်အထားတွေကို
ဖွင့်နိုင်မဲ့ သော့ဝိုင်းရှာကြတာပေါ့ ။
ရက်စက်လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်ခံရသူများ၏နစ်နာမှု ကိုကုစားပေးရန်နှင့်
ထိုကြေကွဲဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်ကို ပြု လုပ်သူအဓိကတာဝန်ရှိသူများကိုဖေါ်ထုတ်ပြီးမြန်မာ့သမိုင်းတွင်
ဗီဒီယိုတိတ်ခွေများ၊ စပိုင်လုပ်သည့် ကိစ္စအမှုတွဲစစ်ချက်များ၊
မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ကို ဟော်လန်နိုင်ငံ အမ်စတာဒန်မြို့ရှိ
International Institute of Social History စာကြည့်တိုက်တွင်
အပ်နှံထားကြောင်း သိရှိ သဖြင့်သွားရောက်လေ့လာရန်လိုအပ် လာပါသည်။
ထို့အတွက် ထိုစာကြည့်တိုက်ရှိသက် ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်သို့စာရေးသားတောင်းဆိုခဲ့ရာေ
I'm sorry to say but I learned today from NDD
that they will not give permission to access
the ABSDF archives (for this particular ABSDF archive
which is listed asaNDD collection permission from
both NDD and ABSDF is needed)
I'm still waiting foraformal reply from ABSDF,
but since you need permission from both,
one negative answer is enough to deny you permission to the documents.
ဒီနေ့မှာNDDကABSDFရဲ့ မှတ်တမ်းများ(Archives) ကိုကြည့်ရှုခွင့်ကိုမပေးနိုင်ကြောင်း
(အဓိကABSDF မှတ်တမ်းများသည် NDD၏စုဆောင်းထားမှုများဖြစ်ပြီး
ကျွန်တော်အခုအချိန်အထိ ABSDF ထံမှပြန်ကြားစာကိုမရရှိသေးပါဘူး၊
ကြည့်ရှုခွင့်ရ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီNDDရဲ့ငြင်းပယ်ချက်တခုထဲနဲ့
ယခုသူ့ဇနီးခင်ဥမ္မာ ဥက္ကဌ လုပ်နေတဲ့ NDD ဟာအမှန်တရားတွေကိုတူးဖေါ်တွေ့ရှိတော့မှာကို
စိုးရိမ်တဲ့အတွက်ပိတ်ပင်လိုက်တာ ကို အထင်အရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ထို့အတုဘဲABSDF ခေါင်းဆောင်တွေကလဲနှာစေးနေတာ တွေ့ရမှာဘဲ၊
ဒီစာရမှ ဒီမှတ် တမ်းတွေကိုABSDF တဖွဲ့ထဲမဟုတ်ဘဲ
NDD ကဝင်ပြီး ထိမ်းထားတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။
ABSDF ဟာNDD လောင်းရိပ်အောက်ကရုံးမထွက်နိုင်ဘဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်
ABSDF ဟာ အလွန်ဂုဏ်သိက္ခာကျတော့မှာဖြစ်တယ်။
NDD ဟာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုမယုံကြည် တော့ပါဘူးဆိုပြီး
ကိုနိုင်အောင် ဦဆောင်မှု့ နဲ့တည်ထောင်ခဲ့တာအများအသိ။
NDD ကိုဦးဆောင်တဲ့ကိုနိုင်အောင် မြောက်ပိုင်းသတ်ဖြတ်မှုမှာ
ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ မှကြည့် လို့ရမယ်ဆိုတော့
ဆယ်ပြားကျော်ကျော်တို့ ဒီဗီဘီကခင်မောင်ဝင်း တို့ကို
You, Ko Lin Wai Aung, Aung Gyi Gsc, Robert Hla Tun and 10 others like this.
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ကိုနေ၀င်းအောင်အင်တာဗျူးနှင့်ကိုစိုးလင်းအင်တာဗျူးမှာဒေါက်တာနိုင်အောင် နဲ့အဖွဲ့ကရိုက်စစ်ပြီးမိုးသီးထောက်လှမ်းရေးလားဟုမေးရာနှစ်ယောက်စလုံးကမဟုတ်ဘူးဖြေ။မိုးသီးဘက်ကဘယ်သူထောက်လှမ်းရေးလဲဟုဆက်မေးရာနှစ်ယောက်စလုံးကဌေးနိုင်ဟုဖြေ။ဒါကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ဌေးနိုင် ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်တာသေချာလို့လား
Htay Tint ကျုပ်က သူ့ အကို အရင်းဘဲ ။ ကျုပ်နဲ့တအိပ်ယာထဲ အိပ်ပြီး ကြီးလာတာ ။http://www.facebook.com/photo.php?fbid=133498330139895&set=a.108043586018703.14443.100004391858271&type=1&theater
ဒဂုံဇုံ ၂ ၁၉၈၄
ထောက်လှမ်းရေးတွေ မသိအောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ
သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ကိုဌေးနိုင် မှတ်တမ်း
By: Htay Naing
Yesterday at 5:51pm · Edited · Like · 2
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံးကိုနေ၀င်းအောင်အင်တာဗျူးကိုကြည့်ပါ။ပြည်တွင်းကကိုစိုးလင်းအင်တာဗျူးကိုဖတ်ပါ။ထောက်လှမ်းရေးသတင်းပေးတွေက မိသားစုကို အသိပေးရသလား
Yesterday at 5:55pm · Edited · Like
Yesterday at 5:55pm · Like · 1
Htay Tint အဲဒီတုံးက မိုးသီးလူလေ . စစ်ရေးတာဝန်ခံလုပ်နေတဲ့လူ ။
Yesterday at 5:57pm · Edited · Like
Htay Tint ကျောင်းသားတပ်မတော်မှာ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေရှိတယ် ။ လူမသတ်ရဖူး ။
Yesterday at 5:59pm · Like · 1
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး အဲဒါကတော့ကျနော်မသိဘူး။ကျနော်လေ့လာနေတာကထောက်လှမ်းရေးသတင်းပေးဟုတ်မဟုတ်
Yesterday at 6:01pm · Like · 1
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ကျောင်းသားတပ်မတော်မှာ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရလူမသတ်ရဆိုရင်ကျောင်းသားတပ်မတော်တရားရုံးမှာဘဲရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလား။
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ဘာကြော်င့်မိုးသီးနဲ့ပိုရင်းတဲ့သူတွေကိုကျော်ပြီးဌေးနိုင်လို့ဖြေရတာလဲ။
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး နှစ်ယောက်ခွဲစစ်တာကိုလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဌေးနိုင်နာမည်ကိုဘာလို့တူတူဖေါ်တာလဲ
Htay Tint ဆရာနေဝင်းအောင် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို သေသေချာချာ နားထောင်ကြည့်ပါအုံး ။ နာမည်တွေပေးပြီး ဟုတ်လားလို့ ဝန်ခံခိုင်းတာလေ ။
Yesterday at 6:09pm · Edited · Like · 3
Way Min အဲဒါတွေက အဓိက တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ. တိုက်ရိုက် ပြောရမဲ့ကိစ္စတွေ ...ကိုဋ္ဌေးနိုင် ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ဘူးလို. ယုံကြည်တဲ့သူက အကိုရင်း တောအထူခိုခဲ့တဲ့သူ ........ထောက်လှမ်းရေးပါလို. စွပ်စွဲခဲ့သူတွေက တစိချိန်တစ်ခါက သွေးဆာနေတဲ့ သူ ... ကဲ ရှစ်လုံးကြီးရေ ...... တောင်ပိုင်းနဲ. မြောက်ပိုင်းတွေမှာ သေခဲ့တဲ့ သူတွေ အားလုံး ထောက်လှမ်းရေးတွေ ချည်းပဲ လို.ခင်ဗျား ဆိုလိုတာလား ........
Yesterday at 6:08pm · Like · 2
Way Min ကိုဋ္ဌေးနိုင် ကိုထောက်လှမ်းရေးပါလို. စွပ်စွဲနိုင်တဲ့ အထောက်အထား လေးများပြနိုင်ကြရဲ.လား ........... ဘေးကလူက ထောက်လှမ်းရေးပါလို. ပြောတိုင်း သတ်ပစ်ရလောက်တဲ့အထိ အသိဥာဏ်တုံးတဲ့ သူတွေ အေဘီ ထဲမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာလား ..........လူညီရင် ဤ ကိုကျွဲဖတ် ချင်တာ ကျောင်းသား တပ်ဖွဲ.က ခေါင်းဆောင်တွေ လား မသိလို. မေးစမ်းပါရစေ ရှစ်လုံးကြီးရေ ....သိချင်လို.ပါ
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ဟုတ်မဟုတ်အဲဒီအထောက်အထားတွေဟာခင်ညွန့်စစ်ထောက်လှမ်းရေးဆီမှာဘဲရနိုင်မယ်။
Way Min ရှစ်လုံးကြီးရေ ငှက်ဖျားမိထားတဲ့သူတစ်ယောက် အနှိပ်စက်ခံရတဲ့အချိန် စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားနေချိန်မှာ သေချင်စိတ်ပေါက်တာ ...... စကားတွေ ရှေ.နောက်မညီတာ ကို အတည်ယူလို.ရသလားဗျ.....အဲဒီလို စကားတွေရှေ.နောက်မညီတိုင်း သာ သတ်ပစ်ရမယ် ဆိုရင် မီုးသီး နဲ. နိုင်အောင် ကို ခင်ဗျား အရင်သွားသတ်ဗျာ
Yesterday at 6:14pm · Like · 1
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ABSDF မှတ်တမ်းတွေအရလဲတဖတ်သတ်ထောက်လှမ်းရေးဆိုလျင်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။မထုတ်ပြန်နိုင်တော့ခက်တယိ။
Yesterday at 6:15pm · Like
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး မဟုတ်ဘူးအခုလတ်တလောအင်တာဗျူးတွေကိုပြောတာ။
Yesterday at 6:16pm · Like
Way Min ထောက်လှမ်းရေး မှတ်တမ်းထဲမှာလဲ ကိုဋ္ဌေးနိုင် ဆိုတာ တောခိုကျောင်းသား ဆူပူသူ ကျောင်းသား တစ်ယောက်အဖြစ်ပဲ ရှိနေတယ် ဆိုရင်ရော ခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုဋ္ဌေးနိုင် သေဆုံးမှု.မှာ တရားခံတွေ ဖြစ်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လို ခင်ဗျား အရေးယူနိုင်မလဲ ဆိုတာ အရင် တွေးတောထားသင့်တယ်ဗျ
Htay Tint ရှစ်လုံး ဝင်ပြီး စဉ်းစားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ သူများတွေ ဘယ်လို မြင်လဲဆိုတာ သိရတော့
Way Min ၈၈ နောက်ပိုင်း မှာ ထောက်လှမ်းရေးရဲ. နည်းဗျူဟာတွေ နဲ. အေဘီ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ. အာဏာလုပွဲ တွေကြား မတရားခံခဲ့ရတဲ့ သူတွေ လို.ပဲ မြင်တယ်
Yesterday at 6:18pm · Like · 1
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ဖတ်ရသလောက်ဌေးနိူင်ဟာမိုးသီးအာဏာကိုလုမဲ့သူလုနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ပါ။
Way Min အေဘီခေါင်းဆောင်တွေ အာဏာလုတယ် လို.ပြောလို. စွပ်စွဲတယ် မထင်နဲ.အုန်းဗျ ..........သေသေချာချာ လေ့လာပြီးမှ ပြောတာ ........တောင်နဲ.မြောက်တောင် ချိတ် ဆက် မမိ ၊ ဥက္ကဋ္ဌ နဲ. စစ်ဦးစီးတောင် မတည့်ချင် ........ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဆိုတာကလဲ ဆွဲမယ် ဖျဲမယ် တကဲကဲ လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ တောင် မတားနိုင် ကျနော်ပြောတာ ဟုတ်မဟုတ် လင်ဗျား သိမှာပေါ့
Yesterday at 6:20pm · Like · 1
Way Min ရှစ်လုံးကလဲ ကိုဋ္ဌေးနိုင် က အာဏာ မလုနိုင်ပေမဲ့ သူ.နောက်လိုက် မဖြစ်နိုင်တာ ကြောင့် ဆိုရင်ရော ဗျ........ အဘက်ဘက်ကတွေးစမ်းပါဗျာ
Tin Maung Tun ကိုယ်ဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကို ရုပ်ပုံမပြရဲဘဲ၊ သတ္တိမရှိတဲ့ ဝေဘန်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတာပဲကိုး။
အေဘီအက်ဒီအက်ဖ်တပ်ဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးနှင့်ပါတ်သက်တဲ့ အထောက်အထားတွေကို မိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်အောင် ခိုးယူသွားခဲ့ခြင်းသည် အလွန်ကြီးမားသော ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာ ရောက်ပါသည်။ ထ...See More
Yesterday at 6:22pm · Like · 6
Way Min ထောက်လှမ်းရေးမှာ တန်ပြန်တွေ ဒလံတွေ ပါမစ်နစ်တွေ အရံတွေ အကူ တွေ အားလုံးကိုဖိုင် ဖလိုဒါတွေနဲ. ရှိပြီးသားပါဗျာ .........မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေလဲ အတိအကျထားရှိထားခဲ့တာ ပါ........
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး အဲဒါဆိုမိုးသီးကဌေးနိုင်ကိုစပြီးထောက်လှမ်းရေးလို့စွတ်စွဲရမှာလေ။
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ဒါပေါ့ဗျာ.အဲဒါတွေကြည့်ခွင့်ရရင်အကုန်ရှင်းပြီ
Way Min အေဘီ တောင်ပိုင်းမှာ ရော မြောက်ပိုင်းမှာပါ သေသေချာချာကြည့်ပါ ရှစ်လုံးရ ..အုပ်စုကွဲတွေ မရှိဘူးလား ........... ကိုဋ္ဌေးနိုင်တို. အချိန်ကာလ တုန်းကလဲ ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာ ......... ငါနှင့်မတူ ငါ့ရန်သူ ....ငါ့မူမလိုက် ရှင်းပလိုက်ဆိုတဲ့ ဆိုတဲ့ စကားတွေ ........... ကွန်မြူ နစ် ခပ်သန်းသန်း အပြောအဆိုတွေ ခုထိ မဖျောက်နိုင်သေးတဲ့ ကွန်မြူ မကျ ဆိုရှယ်မကျ ဒီမီုမကျတဲ့ သူ တစ်ယောက်အနေနဲ. တပည့်တပန်းတွေ များပြီး အုပ်စုဖွဲ.တာ မဆန်းပါဘူး
Yesterday at 6:26pm · Like · 2
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ABSDF မှတ်တမ်းတွေထဲမှာတော့သိပ်ထူးထူးခြားခြားပါစရာမရှိထောက်လှမ်းရေးဖြစ်သည်ဆိုတာဘဲအကျယ်တ၀င့်တွေ့ရမှာဘဲ။သို့သော်လေ့လာနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်။
Way Min ကြည့်ခွင့်မရတာတော့ အသေအချာပဲလေ ...... မထူးခြားဘူးတော့ မထင်နဲ.ဗျ ....... ဖိုင်တစ်ခုမှာ အနည်းဆုံး စာမျက်နာ ၁၅ မျက်နာကျော်တယ် .... ........ မီုးသီးဖိုင်ဆိုရင် ဒိထက်များမယ်ထင်တာပဲ .......
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံးအုပ်စုကွဲတိုင်းထင်သလိုသတ်ခွင့်ရရင်ကုန်ပြီပေှါ့ဗျာ။အခုပြောနေတဲ့ဌေးနိုင်အကိုရောဟိုတရားသူကြီးဟောင်းထောက်လှမ်းရေး စွတ်စွဲခံရသူတွေအသက်ရှင်နေကြတာဘဲ။
Yesterday at 6:30pm · Like
Way Min ရှစ်လုံးကြီးလဲ သေချာတွေးစမ်းပါဗျာ ......... လှည်ကွက်ဆိုတာ ထောက်လှမ်းရေး တစ်ခုတည်းမှာပဲ ရှိတာ မဟုတ်ဘူးဗျ... .. လှည့်ကွက်ကောင်းရင် တပ်ကောင်း တောင် ထောင်းထောင်းကျေ တယ် လေ ဗျာ ..သေသေချာချာတွေး
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး မိုးသီးဖိုင်ဆိုတာဘာပါလဲကျနော်မသိလို့
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ထောက်လှမ်းရေးလှည့်ကွက်လို့ပြောတာလား
Yesterday at 6:33pm · Like
Way Min ကျနော် ဒဲ့ပဲပြောမယ်ဗျာ ထောက်လှမ်းရေး ရဲ. လှည့်ကွက်နဲ. အေဘီ ခေါင်ဆောင်တွေရဲ. အုပ်စုခွဲအာဏာပြိုင် မှု. တွေ ကြောင့် ကြားက သူတွေ ခံရတာ
Way Min ထောက်လှမ်းရေးက သိမ်းထားတဲ့ မီုးသီးရဲ. ကိုယ်ရေး အချက်အလက်ဒေတာ ဖိုင်တွေကိုပြောတာ ဗျ
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး အဲဒါတွေခင်ညွန့်ပြုတ်တဲ့အခါမဖျက်ဆီးခဲ့ဘူးဆို။၇င်တနေ့မှာကြည့်လို့ရနိုင်တယ်။
Way Min အဖွဲ.အစည်းတိုင်းမှာ အာဏာပြိုင် တဲ့ လှည့်ကွက်တွေ ရှိစမြဲပဲဗျ ......... ဦးခင်ညွန်. ဘာကြောင့်ပြုတ် လဲ ........အေဘီဘာကြောင့် ပြိုကွဲသွားလဲ ..ဖဒိုမန်းရှာ ဘာကြောင့် လုပ်ကြံခံရသလဲ ......... ဆိုတာတွေ က သက်သေပေါ့ ရှစ်လုံးကြီးရ
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ဒါဆိုထောက်လှမ်းရေးတနည်းတဖုံပါတာကိုတော့ခင်ဗျားလက်ခံတယ်ပေါ့။
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး ဟုတ်ပါတယ်နိုင်အောင်မိုးသီးကွဲတာရှင်းနေတာဘဲ
Way Min လက်ခံတယ်ဗျ ..........
Yesterday at 6:40pm · Edited · Like
Way Min ထောက်လှမ်းရေး ဆိုတာ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ပါမစ်နစ် မြို.ပေါ်က သူတွေတောင် လမ်းကြို လမ်းကြားက ဂျလေဘီတွေရဲ. ဒေတာတွေ ကို စနစ်တကျ ထားသေးတာပဲ..... စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ
Way Min ကဲ အလုပ်ကိစ္စလေးပေါ်လာလို. အောက်တော့မယ် ပြန်တက်လာမှပဲ ဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ ရှစ်လုံးကြီးရေ
Yesterday at 6:42pm · Like
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး https://www.facebook.com/photo.php?fbid=469623169754281&set=a.431197800263485.88807.301458409904092&type=1
သန်လျင်မြို.နယ် NLD ပါတီရုံးအတွင်း သတင်းပေးတစ်ဦးအား ဖေါ်ထုတ်ရရှိ။
By: Thit Htoo Lwin blog
Yesterday at 6:52pm · Like
Min Thit စစ်ဗိုနိုင်ရှစ်လုံး ဆိုတဲ့လူခင်ဗျား
လူမဆန်မူ၊ မင်းမဲ့စရိုက်၊ အာဏာကိုထင်ရာလုပ်မူကသာ အဓိကစိတ်ဝင်
အဲ့ဒီလို လက်တွေချေတွေထဲသံရိုက်သွင်း၊ မီးရိူ့၊ ဖင်ထဲကိုသံချောင်းထည့်မွှေ
အဆိတ်တွေထည့်ထားတယ်ဆိုပြီးနိူက်ရှာ . . . . . အဲ့ဒီလိုလုပ်ထာတွေဟာ
ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပြီး စစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချလို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်
တင်မဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေလားလို့ . . . . . .
Wunna Htun ထောက်လှမ်းရေးဆိုတိုင်း တရားလက်လွတ်သတ်ခွင့်မရှိပါ။ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေမှာ စစ်သုံ့ပန်းတွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာ ရှိပြီးသားပါ။ ဒီလိုလူမဆန်စွာသတ်တာဟာ ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ ဘယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းကမှ လက်မခံပါဘူး။
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး စစ်သုံးပန်းနဲ့သူလျှိူလုံးဝမတူပါ။ကမ္ဘာပေါ်ကကြိက်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်(တရားဝင်စစ်တပ်၊တော်လှန်ရေးတပ်အားလုံး)တိုက်ပွဲကာလမှာသူလျိူမိရင်လူ့အခွင့်အရေးပေတံနဲ့ဘယ်သူမှမကျင့်သုံးပါ။အေဘီထက်သက်တမ်းရင့်တဲ့လက်နက်ကိုင်အားလုံးသွား ကြည့်ပါ.ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်မသက်ကအဓိကကြပါတယ်။
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံး အမေရိကန်မှာတောင်ဥပဒေအရtortureလုပ်ခွင့်မရှိတော့Enhanced interrogation techniques လို့ပြောင်းသုံးပါတယ်။ဂွာတာနာမိုမှာအဲဒီဒဏ်တွေမခံနိုင်တော့လို့သတ်သေသွားသူ အနည်းဆုံး၆ယောက်ရှိပါပြီ။
စစ်ဗိုလ်နိုင် ရှစ်လုံးအမေရိကန်လည်းဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေကာကွယ်ဖို့စစ်တိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်နေရာတိုင်းကျင့်သုံးပါသလား။ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်း စဉ်အမြဲတမ်းထပ်တူမကျနိုင်ပါ။ဗမာစစ်တပ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောရင်ပိုဆိုးပါမယ်။
Tamar Khin ကိုထွန်းအောင်ကျော် (အမေရိက)ရေ ကျမက အကုန်သိသလိုရေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ခင်ဗျာ့ ထိုင်ကိုးကွယ်နေတဲ့ နန်းအောင်ထွေးကြည် လုပ်ခဲ့ပြောခဲ့တာတွေနဲ့ ကျမ ကြားသိထားခဲ့ရတာတွေ အပေါ် ပြန်မေးခွန်းထုတ်ရေးထားတာပါ၊ မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေ ဖျောက်ပစ်မှာ သိပ်အစိုးရိမ်မနေကြပါနဲ့ ဒီကိစ်စတွေ လုပ်တုန်းက မရိုးသားခဲ့ရင် အမှု့ဖျောက်ချင်ရင် နဂိုကတည်းက
Tamar Khin ဗွီဒီယိုရိုက်ခဲ့တာတွေ ။ သတင်းထောက်တွေ ခေါ်ပြခဲ့ကြတာတွေကအစ ဘာမှတ်တမ်းမှတ်ရာမှ ထားနေကြစရာ အကြောင်းတောင် မရှိဘူး၊ အခုပြောနေတဲ့သူတွေကို ထုတ်ပေးရအောင် အဲဒီလူတွေက ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ တရားသူတွေကြီးမို့လို့ လား။ ဒါမှ မဟုတ်ဖွတဲ့လူတွေလား၊
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး ကျနော်တော့ ဘာမှတ်တမ်းမှ မရှိတော့ဘူး ကြားတာပဲ...
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:26 PM